Saosy Bolognese | ThermoRecipes
Carnes28 minitraOlona 6
Andro vitsy lasa izay dia nandefa tamin'ny Internet aho mahandro paty ary maro aminareo no nangataka ahy hametraka ilay fomba fahandro Saosy Bolognese.
Ity fomba fahandro ity dia iray amin'ny vadin'ny vadiko ary ankafizin'ny zanako vavy ankehitriny, ka ataoko matetika matetika. Talohan'ny nanaovako azy tamin'ny fomba hafa, fa ny fananako ny Thermomix® sy ny fahitako ny fomba fahandro ao amin'ilay boky, dia namporisihina aho hanomana azy ary satria nanandrana izy ireo dia ny kinova tianao indrindra.
Ato amin'ity recette ity dia ampio legioma toy ny karaoty, dipoavatra maitso, holatra ary zava-manitra isan-karazany ary tsara be izany. Azonao atao koa ny mampiasa hen'omby, henan-kisoa na fifangaroan'izy roa.
Azontsika ampiasaina ity saosy ity hanomanana fomba fahandro tsy misy farany como el lasagna, legioma tototry, cannelloni, pizza na amin'ny lafiny ilana paty.
1 Fetiko manokana
2 Saosy Bolognese
Ny hafetseko manokana dia ny manampy sotro roa tsaramaso spaghetti. Nampiasa iray izay novidiko tao Mercadona nandritra ny taona maro aho ary tiako ny mikasika azy io.
Ity dia sosokevitra kely iray nomen'ny rafozambaviko ahy ary misaotra azy aho satria tamin'io fikitihana io dia nanandrana ny pasta al fomba italiana madio.
Amin'ity fomba fahandro ity dia afaka manamboatra lovia paty matsiro ianao.
Fotoana hiketrehana: 28M
Karaoty 130 g
Tongolo 130 g
Tongolo lay jirofo 1
Dipoavatra maitso 50 g
Holatra 180 g
Voatabia voatoto 500 g
50 g menaka oliva virjiny fanampiny
Hena voatetika 500 g
Oregano 1 sotro fihinanana
Fanendahana spaghetti 2 sotro fihinanana
Apetrakay ao anaty vera ny karaoty, tongolo gasy, tongolo ary sakay maintso. Tetehinay Hafainganana 2 segondra 5.
Arotsahy ao anaty vera sy voatoto ny holatra sy voatabia 15 segondra, hafainganam-pandeha 5-10.
Ampio ny menaka ary endasina 7 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Napetrakay ny hena voatoto, ny sira, ny ravina bay ary ny sisa amin'ny zava-manitra. Afangaro tsara ny hena miaraka amin'ny legioma amin'ny fampiasana spatula sy programa 20 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Avelao izy hipetraka ao anaty vera mandritra ny minitra vitsy ary ahitsy ny teboka sira. Raha be loatra ny ranony dia apetratsika minitra vitsy hafa amin'ny fanesorana ny kaopy sy ny fametrahana ny sobika hisorohana ny famaohana ny voatabia.
Fanazavana fanampiny - Masaka paty / Lasagna / Eggplants parmigiana
Loharano - Tena ilaina
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Carnes, Tsotra, Latsaky ny 1/2 ora, Resipeo ho an'ny ankizy, Saosy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Carnes » Saosy Bolognese
Ao amin'ny Mercadona misy an'io fanaranam-po io ve?
Tsy maintsy jereko izany satria raha efa tianay ity saosy ity amin'ny tmx miaraka amin'ny teboka fanampiny, tsy tsara kokoa ve?
Fombako ny manao azy sy manala azy ary amin'izany andro maika izany dia mahandro ny paty, period.
Ao anaty siny misy ny zava-manitra ny zava-manitra ary manome teboka tena manan-karena an'io saosy io.
Tsy haiko koa ny momba ny zava-manitra, tadiaviko io izao! Izaho, toy ny thermo, dia manao ny kilao sy mangatsiaka ao anaty siny fitaratra tsirairay hoentina mivoaka, indrindra ho an'ilay kely. Ary tsy napetrako koa ny laurel, dia andramako avy hatrany! Misaotra Silvia!
Imbetsaka koa aho no miasa ary mivaingana mba hiomanana amin'ny andro hafa. Tian'ny zanako kely izany.
angelabredu dia hoy izy:
SALAMA!! Sambany aho no manoratra… .m, tiako ilay pejy… .ary ny tmx-ko… ..ny zanako vavy fahatelo, hahaha. Eny, manana andriambavy roa aho ao an-trano, ary 3 taona ny zokiny indrindra, rehefa mandre ny feony izy rehefa mandeha ny feony, dia hoy izy: «Dada: matahotra aho ...». Efa iray volana monja aho no niaraka taminy. Faly aho fa mbola mila ianarana.
Momba ity fomba fahandro ity dia tiako ho fantatra raha am-bifotsy na voajanahary ireo holatra.
misaotra ary mandrosoa amin'ny resipeo
Mamaly an'i angelabredu
Ny holatra napetrako tao anaty am-bifotsy matetika satria ananako ireo foana saingy azonao atao ihany koa ny mametraka azy ireo voajanahary ary mivoaka tsara.
Miombon-kevitra amin'ny ambiny aho, tsy maintsy hitady an'io zava-manitra io isika ha. Tena tsara ilay recette.
Manoro hevitra azy aho, satria manome azy io tena mahaliana.
Tsara be !! Efa nanandrana azy aho tamin'ny vanim-potoana, araka ny lazain'i Silvia ary amporisihiko izy rehetra, tena matsiro be !!
Misaotra Mary, faly aho fa mahandro lakozia be ianao. Oroka
Salama, Isa no anarako ary niaraka tamin'ny thermomi nandritra ny fotoana fohy aho, miarahaba anao voalohany amin'ny pejy fa tena mahaliana, ary mianatra zavatra maro ianao, indrindra ho an'ireo vao teraka toa ahy.
Ankehitriny dia te-hametraka fanontaniana aminao aho, azonao atao ve ny mandefa ahy ny recette hanamboarana saosy maitso ho an'ny trondro? Io dia ao anaty boky misy resipeo nefa mivoaka be ranoka, tiako ho matevina kokoa.
Isa, tsy nanandrana nanao an'io aho raha indray andro any ataoko, faly aho mamoaka azy, na dia izany aza no tsaroanao fa manampy mihalehibe ny vovo-katsaka ary raha efa apetrakao io dia mihabe ny grama.
Te-hisaotra anao aho noho ireo fomba fahandro mahavariana.
Mamaly an'i ana maria
Ana Maria, misaotra anao noho ny fanarahana anay isan'andro. Faly aho fa tianao ny fomba fahitanay.
Salama, te hahafantatra izay ahitako ny zava-manitra, mbola tsy hitako mihitsy, misaotra
Mividy izany ao amin'ny Mercadona aho, izay misy ny siny misy ny zava-manitra ary antsoina hoe spaghetti na manitra pasta io.
Salama Silvia, maharitra hafiriana ny saosy ao anaty vata fampangatsiahana nefa tsy mangatsiaka?
Elena, tsy mety ny manana saosy raha tsy mihinana mandritra ny efatra andro. Efa napetrako daholo ny zavatra tsy laniko ao anatin'ny roa andro.
Miarahaba anao fotsiny amin'ny bilaoginao. Tena mahaliana, ilaina, tsotra, feno, nohavaozina ... Manampy be dia be ho antsika izay nanomboka teto amin'ity tontolon'ny thermomix ity. Misaotra nanao azy mora.
Bonjour, mba tiako ho fantatra fa ny "sotro" ny zava-manitra no lehibe, misaotra.
Sotro lehibe izy ireo.
KUBI dia hoy izy:
Miarahaba anao amin'ny bilaogy, mahafinaritra izany.
Ahoana no fomba "hiova" ho an'ny TM21 ity recipe ity?
Mety hahasoa tokoa raha apetrakao ao anaty resipeo ny fanovana kely izay tsy maintsy ataontsika, ireo izay mbola tsy te hiala amin'ny TM21 taloha…. ;-)
Valiny amin'i KUBI
Hitovy ny zava-drehetra afa-tsy ny dingana farany, alohan'ny hanampiana ny hena dia apetrantsika amin'ny lolo ny lolo, ampio ny hena sy ny sisa amin'ireo fangaro ary fandaharana 20 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Ho antsipiriany lehibe izany raha toa ka mametraka ireo fanovana kely ireo amin'ny resipeo izay mbola toherinay ny fanomezana ny TM21 taloha !!!
Matsiro !!, na amin'ny manaraka aza dia hametraka tongolo kely kokoa aho
Vitako ity faran'ny herinandro ity ary tena nanjary tsara. Misaotra betsaka tamin'ny recette rehetra !!!!!!
Tiako raha omenao ahy ny fomba fahandro ny mahia amin'ny voatabia, tiako izany, satria tian'ny zanako vavy izany.
Victoria, hitako taminao ity fomba fahandro ity. Tsy mbola vitako io fa aleo jerena raha mendrika izany. http://www.recetario.es/receta/2016/magro-con-tomate.html
Nahita anao aho androany sendra nitady fomba fahandro mahaliana ahy. Tsy fantatro raha mbola ho eo ianao, fa raha misy ianao dia tiako ny milaza aminao fa efa niaraka tamin'ny thermomix nandritra ny herintaona sy tapany aho ary faly aho. Ny fomba fanamboarana spaghetti Bolognese, tamin'ny fotoana voalohany nanaovako miaraka amin'ny tm, tianay izany. Manantena aho fa afaka mifandray hatrany amin'ny rehetra. Oroka lehibe
Salama rosa! Mazava ho azy fa eto izahay ary faly miaraka aminao. Misaotra betsaka tamin'ny hevitrao, ka raha efa niaraka tamin'ny TMX nandritra ny 1 taona sy tapany ianao dia ho manam-pahaizana. Jereo tsara ny tranokalanay satria manana resipeo be dia be izahay, ary tsara daholo! Hiandry anao izahay!
Salama, hitako ny bilaoginao androany ary tiako izany. Te hamporisika ny hanao ny orampanala amin'ny Thermomix, sy ny voasarimakirana koa aho. Miarahaba.
Misaotra betsaka noho ny tolo-kevitra narosonao! Ao an-trano dia miankin-doha amin'ny voasarimakirana amin'ny fahavaratra isika ary izao dia mitady tolo-kevitra vaovao!
Raha tianao ny bilaoginay, mamporisika anao aho hisoratra anarana. Maimaimpoana ary mandray resipeo isan'andro amin'ny mailaka ianao!
"Spices" azafady, misy karazana biby eny.
Iñigo, nanitsy ny fomba fahandro nomen'i Elena mpiara-miasa amintsika. Misaotra betsaka amin'ny fankasitrahana! Amin'izao fotoana izao dia misy fisavoritahana kely eo amin'ireo teny roa ireo ary amin'ny fampiasana azy dia voavily. Izaho, izay mpanoratra, dia mizara tanteraka aminao ny maha-zava-dehibe ny fampiasana amin'ny fomba marina ireo teny roa ireo. Misaotra! Famihinana.
Amin'ny fotoana inona ao amin'ny fomba fahandro no apetraka ny voatabia?
Mamaly an'i kubi
Salama Kubi, tsy maintsy apetrakao amin'ny teboka 2. 🙂
Akorany paoma dibera